နန်းမြို.ရိုး၊ကျုံး၊မန္တလေးတောင် တို.နှင့်စကားလက်စုံကျခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » နန်းမြို.ရိုး၊ကျုံး၊မန္တလေးတောင် တို.နှင့်စကားလက်စုံကျခြင်း
Posted by ရွှေတိုက်စိုး on May 28, 2012 in Creative Writing | 30 comments
ကျွန်တော်မန်းလေးကို သွားရပြန်ပါပြီ…… စိတ်ထဲမှာတော့ပျော်နေတာပေါ့
မန်းလေးကို စရောက်ရင်ပဲ မန်းလေးရဲ.နွေးနွေးထွေးထွေး သိသိမသိသိကြိုဆိုကျတဲ့ ဆိုင်ကယ်တက်ခ်စီ သမားများနဲ. စတင်တွေ.တာပါပဲ…. အလုပ်အရက်အပြိုင်အဆိုင်ကို ကြိုဆိုနေကြတာပါပဲ…
အိမ်ကလာကြိုလို. ကြိုဆိုရေးသမားတွေကို မနည်းရှောင်ကာ အိမ်ပြန်ရောက် ရေမိုးချိုးပြီး လက်ဖက်ရည်ကို မင်းသီဟမှာသောက် ပြီးတော့ အော် ငါ နန်းမြို.ရိုးနဲ. မန်းလေးတောင်ကို သွားကြည့်ပါအုံးမယ်လေ ဆိုပြီး ကျုံးဘေးမှာ ဆိုင်ကယ်လေးဖြေးဖြေးစီးပြီး သွားနေတာပေါ့ …. ဆီဒိုးနားထောင့်ရောက်တော့ ခဏရပ်ပြီး နန်းမြို.ရိုး ကျုံးနဲ. မန်းလေတောင်ကို တ၀ကြီး ကြည့်နေတာပေါ့…
အဲဒီမှာဗျာ… နန်းမြို.ရိုးက ကျွန်တော်ကို စိမ်းစိမ်းကြီးစိုက်ကြည့်နေတယ်ဗျ…. ကျွန်တော်လဲ တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်…. ဒါနဲ.ကျွန်တော်လဲ နန်းမြို.ရိုးကို လှမ်းခေါ်လိုက်တယ်…
ကျွန်တော်။ ။ ဟေ့လူ နန်းမြို.ရိုးကြီး နေကောင်းလား…………….
။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။ ဘာမှပြန်ထူးသံမကြားရဘူးဗျ… စိမ်းစိမ်းကြီးပဲ စိုက်ကြည့်နေတယ်.. ကျွန်တော်ကို မှတ်မိပုံမရဘူးဗျ…ဒါနဲ. ကျွန်တော်လဲ ထပ်ခေါ်တာပေါ…..
ကျွန်တော်။ ။ ဟိတ်လူကြီး ကျွန်တော်ကို မမှတ်မိတော့ဘူးလားဗျ ကျွန်တော်မန်းလေးသားအစစ်ကြီးပါ.. သင်္ကြန်ဆို ခင်ဗျားနဲ.အတူတူ ကဲနေကြလေ…………
နန်းမြို.ရိုး။ ။ ဟေ…………. အော် ဟုတ်လား အော်ကောင်လေး ငါမင်းကိုမမှတ်မိလို.ဆောရီးကွာ…
ကျွန်တော်။ ။ ရပါတယ် အခုမှတ်မိပြီမို.လား…………
နန်းမြို.ရိုး။ ။ အင်းမှတ်မိတာပေါ့ မင်းတောင်မတွေ.တာကြာပြီဘယ်ပျောက်နေလဲကွ….
ကျွန်တော်။ ။ ဒီကိုပါပဲဗျာ အလုပ်နဲ.ဆိုတော့ ပျော်ရာမှာမနေ တော်ရာမှနေပြီး ဘ၀အတွက် ရုန်းကန်နေရတာပေါ ကိုရိုးရာ… ဒါနဲ.နေပါအုံး ကျွန်တော်ကို အဲလောက် စိမ်းစိမ်းကြီး စိုက်ကြည့်နေတာ ဘာလို.လဲဗျ…
နန်းမြို.ရိုး။ ။ အော်ဒီလိုကွ ကောင်လေးရ မင်းက အသားကလဲဖြူ၊ရုပ်ကလဲ မျက်နှာဝိုင်းဝိုင်းနဲ. ငါက တရုတ်မှတ်လို.ကွ…… အဲဒါ ငါအခြေအနေအကဲခတ်နေတာ… ဒါကြောင့်ကြည့်တာ…
ကျွန်တော်။ ။ နေစမ်းပါအုံး ကိုရိုးက ဘာလို.တရုတ်ဆို ဘာများလုပ်မလို.လဲ…
နန်းမြို.ရိုး။ ။ အမလေး ဘာမှမလုပ်ပါဘူးကောင်လေးရယ်… ငါ့ကိုလုပ်မှာစိုးလို.ပါဟ….
ကျွန်တော်။ ။ ဘယ်လိုများလဲ ရှင်းစမ်းပါအုံးဗျ…ကိုရိုးရ
နန်းမြို.ရိုး။ ။ဒီလိုကွ ကောင်လေးရ ငါအခုနေနေရတာ မျက်ခုံးက ခပ်လှုပ်လှုပ်ကွ…. မယုံရင် ကျုံးမေးကြည်…
အဲဒီအချိန်မှာ တချိန်လုံးငြိမ်နေတဲ့ ကျုံးက
ကျုံး။ ။ ဟုတ်ပ………..
နန်းမြို.ရိုး။ ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ငါတို.မန်းလေးမြို.က အခုဆို တရုတ်မြို.ဖြစ်တော့မှာလေ… တရုတ်တွေ ငါကို မျက်စပစ်နေကြတာ ငါသိတာပေါ့…. ငါမှာကွာအခု နေနေရတာကို မ၀ံ့မရဲနဲ.ကွယ့်…
တော်ကြာ ငါ့ကို မောင်မောင်တရုတ်များက စက်မှုဇုံ ဒါမှမဟုတ် မြို.ပြစီမံကိန်းလုပ်ချလိုက်မှဖြင့် ငါ့တသက်လုံးစောင့်ထိန်းလာတဲ့ ငါ့အမွေအနှစ်လေးတွေ ကုန်သွားမှာပေါ့ကွာ… ဒါတောင် ငါဘော်ဒါ ကျုံးလေးခံနေလို. လမ်းချဲတဲ့ အခါ မပါသွားတာ.. ဟေဟေ…
ကျုံး။ ။ ဟုတ်ပ ဟုတ်ပ ကျုပ်လဲ ဘာထူးသေးလဲ ကောင်လေးရယ်…. ကျုပ်လဲ ရေသေကျုံးမို.လို. ရေရှင်များဆို လျှပ်စစ်အထုတ်ခံရမလားတောင်မသိပါဘူး…. ငါ့ဖြင့် လေတိုက်ရင်တောင် လှိုင်းကြက်ခွပ်မထရဲဘူး……. တော်ကြာရေစီးသန်တယ်ထင်ပြီး ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းဆောက်လိုက်မှဖြင့် ငါ့မနိုင်ဝန်ထမ်းနေရအုံးမယ်လေ….
နန်းမြို.ရိုး။ ။ ဟဟဟဟဟဟ …. ငါကောင်ကျုံးက တယ်နောက်သကိုးကွ… အေးကွ ကောင်လေးရ နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်… ငါ့ရင်ခွင်ထဲက အမျိုးကောင်းသမီးအမျိုးကောင်းသားတွေလဲ အခုဆို ငါနဲ.ဝေးရာမှာ မနေချင်ပဲနေနေရတော့တာပါပဲကွာ………… ဟင်းးးးးးးးးးးး(သက်ပြင်းအရှည်ကြီးချသံ)
ကျွန်တော်။ ။ အာ… ကိုရိုးနဲ.ကိုကျုံးနှယ်ဗျာ အဲလောက်လဲ မကြောက်ပါနဲ. ခင်ဗျားတို.ပြောသလိုအဲလောက်မဆိုးလောက်ပါဘူးဗျာ…
ကျုံး။ ။ ဒါနဲ.နေစမ်းပါအုံးကောင်လေးရ မင်းမန်းလေးသားစစ်တယ်ဆိုတာသေချာသလား…
ကျွန်တော်။ ။ စစ်ပါတယ်ဗျ… မယုံစစ်ကြည့်မလား…. ဒါမှမဟုတ် ဟိုမှာထိုင်နေတဲ့ မန်းလေတောင်ကိုမေးကြည့်ဗျာ…… ဗျို. မန်းလေးတောင်ကြီး လုပ်ပါအုံးဗျ….
မန်းလေးတောင်။ ။ ဟေ…… ဘာလဲဟ…
တချိန်လုံးငြိမ်နေတဲ့မန်းလေတောင်ဆီက စကားတခွန်းထွက်လာတော့ လန်.တောင်သွားတယ်….
ကျွန်တော်။ ။ အော် မန်းလေးတောင်ကြီးရယ်… ကျွန်တော် ခင်ဗျားတောင်ခြေ စစ်တပ်ထဲမှာမွေးပြီး ကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့မန်းလေးသားစစ်စစ်ပါဆိုတာ ဒီက ကိုနန်းမြို.ရိုး နဲ. ကိုကျုံးက မယုံဘူးတဲ့ဗျာ…လုပ်ပါအုံး…
မန်းလေးတောင်။ ။ ဟုတ်တယ်ကွ ဟေ့ကောင်တွေရ… မင်းတို.မလဲ မမြင်ဘူးတဲ့ လူဖြူဖြူမြင်ရင် ကြောက်ဒူးတုန် နေတဲ့ ကောင်တွေပဲ… ဟဟဟ
နန်းမြို.ရိုး။ ။ အောင်မာ မင်းကရောဘာထူးသေးလဲ… ဘာမှမပြောနိုင်မဆိုနိုင် ထိုင်စိတ်ဆင်းရဲနေတာမို.လား…. မြို.အပေါ်စီးကနေစီးကြည့်နေပြီး ဘာမှပြန်မပြောနိုင်တဲ့ ကောင်ကများကွာ..
မန်းလေးတောင်။ ။ ဟကောင်ရ ငါအပေါ်စီးက မြင်ရပေမယ့် မနက်က ကိစ္စမရှိပေမယ့်.. ညည တစ်မြို.လုံး မှောင်မဲနေတာ ငါဘာမှမမြင်ရဘူးလေကွာ… အဲဒီတော့ ငါမင်းကိုဘာပြောပြရမလဲ… ငုတ်တုတ်ထိုင် နေရုံပဲရှိတော့တာပေါ့ကွာ….
ကျွန်တော်။ ။ ကဲပါ ထားလိုက်ပါတော့ ရန်မဖြစ်ကြပါနဲ.တော့..ဗျာ..
ကျုံး။ ။ ဟုတ်သားပဲဗျာ.. ကိုနန်းနဲ. ကိုမန်းလေးတောင်ရာ…. ဟဲဟဲဟဲ
ကျုံး။ ။ စိတ်မရှိပါနဲ. ကောင်လေးရာ ငါတို.မှ မမြင်ဘူးတဲ့လူမြင်ရင် ငါတို.များ ဘာစီမံကိန်း ဘာဆောက်လုပ်ေ၇းများ လုပ်မလဲ ရင်တမမ နဲ. အကဲခတ်နေရတာပေါ့ကွာ…
မန်းလေးတောင်။ ။ အခုလဲကြည့်လေ.. ငါတို.မန်းလေးက အရင်တုန်းက ထိုင်မသိမ်း နဲ.ရွှေခြေခြင်းနဲ. လှပျိုဖြူတွေက အခုတော့ ဇီးရိုးကွာတားဆိုလား ဘာလားမသိပါဘူးကွာ.. ဘောင်အထက် တိုနန်.နန်. တွေ၊
စကဒ်လို.ခေါ်တဲ့ တိုနန်.နန်. အ၀တ်စပတ်ထားတာတွေနဲ. ငါတို.မှာ နေ.တိုင်းစိတ်ကိုမချမ်းသာပါဘူးကွာ..
နန်းမြို.ရိုး။ ။ ဟုတ်ပဗျာ.. အရင်တုန်းက ကျုပ်ဘေးမှာ အေးတူပူအမျှ နေလာကြတဲ့ ကျုပ်ဆွေမျိုး မိတ်ဆွေအားလုံးလဲ ငါနဲ.ဝေးရာမြို.ပြင်တွေ ရောက်ကုန်ကျပေါ့ကွာ…
ကျုံး။ ။ ဟုတ်ပ စိတ်မကောင်းတာ… ကျုပ်စိတ်မကောင်းတာတစ်ခုရှိသေးတယ်.. အခု ကျုပ်တို.လူတွေ ရေပျက်နေကြတယ်လေ… ကျုပ်မှာရေတွေရှိတာပဲဗျာ… ပေးချင်လိုက်တာ…
မန်းလေးတောင်။ ။ ဟဟဟ အောင်မာ ဒီကောင်ကျုံး အခုမှ အသံထွက်လာတယ်.. သူဖြင့်တုတ်တုတ်တောင် မလှုပ်ပဲနဲ… ရေမြင်ရင်ရေအားလျှပ်စစ်ထွက်မယ်ဆိုတဲ့ ကိုကိုတရုတ် များကို ဖင်တုံအောင်ကြောက်နေတဲ့ကောင်ကများ…ဟဟဟဟ
ကျုံး။ ။ ခင်ဗျားနဲ.ဗျာ အဲလိုတော့ မပြောပါနဲ… ဟီးဟီးဟီး
ကျွန်တော်။ ။ ဟုတ်ပ အခုပြောနေတာတွေလဲ ကျွန်တော်ကြားပါတယ်… သတင်းတွေမှာလဲ ဖတ်ရပါတယ်.. ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ ကိုနန်းတို.၊ ကိုကျုံးတို.၊ ကိုမန်းလေးတောင်တို. အခုအချိန်ထိရှိနေသေးတာပဲ. ဘာမှပူမနေပါနဲ.ဗျာ..
ကျွန်တော်တို. ခင်ဗျားတို.နဲ.ဝေးရာကို ရောက်နေကြပေမယ့် ခင်ဗျားတို.ကို ထိရင် ကျွန်တော်တို. မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ အားလုံး အထူးသဖြင့် မန်းလေးသူ မန်းလေးသားတွေက လက်ပိုက်ကြည့်နေမှာ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ.. ဦးဦး ဧရာဝတီကိုပဲကြည့်လေ………..
နန်းမြို.ရိုး။ ။ အေးကွ မင်းပြောတာလဲ ဟုတ်သလိုလိုပဲ..
ကျုံး။ ။ ဟုတ်ပ…
မန်းလေးတောင်။ ။ အေးလေ ကောင်လေးပြောမှပဲ ငါတို.အားနဲနဲရှိသွားတော့တယ်.. ကဲပါ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ငါတို.ရဲ. နေရာတွေကို ဘယ်လိုမှ လက်လွတ်ခံကြမှာမဟုတ်ပါဘူး… နော့ကောင်လေးရာ…
ကျွန်တော်။ ။ ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ… ကျွန်တော်ကတော့ ခင်ဗျားတို.ကို ဘာမှ အကူအညီမပေးနိုင်ပေမယ့်… စကားနဲ.တော့ အားပေးနိုင်ပါသေးတယ်ဗျာ.. ကျွန်တော်က ခင်ဗျားတို.ကို ကာကွယ်နိုင်တဲ့ အရည်အချင်းအဆင်းအတန်းကလဲ မရှိလေးတော့… တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ ကာကွယ်ပေးမယ်လို. ကတိပေးပါတယ်ဗျာ……..
ကဲကဲ.. ကျွန်တော်လဲ ရုံးတက်ရအုံးမယ်ဆိုတော့ သွားရတော့မယ်ဗျာ…
နန်းမြို.ရိုး။ ။ အေးကွာကောင်လေးရာ နောက်လဲလာလည်ပါအုံး…. ငါတို.မှာ မင်းတို.လို. မန်းလေးသား အစစ်လေးတွေနဲ. စကားမပြောရတာ ကြာတော့ တွေ.တုံးလေးအားရပါးရပြောရတာပါကွာ..
ကျုံး။ ။ အင်းဟုတ်ပ…. စကားပြောလို.တောင်မ၀သေးဘူး…. အလုပ်နဲ.ဆိုတော့လဲ ခွင့်လွှတ်ပေးရမှာပေါ့… နော့ကွာ…
မန်းလေးတောင်။ ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကောင်လေးရာ မင်းလို ကောင်လေးမျိုးတွေရှိနေတာ ငါတို.အားရှိသေးတယ်ပေါ့.. ဒါပေမယ့်ကောင်လေးရာ မင်းတို.တတွေက အဝေးမှာလေ… ငါတို.တော့ နဲနဲအားလျော့တာပေါ့ကွာ…
ကျွန်တော်။ ။ ဟာဗျာ… ကိုမန်းလေးတောင်ကြီးရာ စိတ်မကောင်းအောင်မပြောပါနဲ… ကျွန်တော်တို.တစ်နေ.နေ.တစ်ချိန်ချိန်မှာ ခင်ဗျားတို.ကို ကွာကွယ်ဖို.ကြိုးစားနေပါတယ်… အခုလဲ ကြိုးစားနေတာပါပဲ…
ကျုံး။ ။ ဟုတ်ပါ့ဗျ… ကိုမန်းလေးတောင်ကြီးနှယ့် ကောင်လေးစိတ်မကောင်းအောင် လျှောက်ပြောနေတာ.. အခုလဲ ဒီအတိုင်းရှိနေသေးတာပဲကိုးဗျာ……. ကဲကဲကောင်လေး အလုပ်နောက်ကျနေမယ် သွားသွာ….
ကျွန်တော်။ ။ ဟုတ်ဟုတ် … ကဲ ကျွန်တော်သွားလိုက်အုံးမယ် ကိုနန်း၊ကိုကျုံး၊ ကိုမန်းလေးတောင်ကြီးရေ…
သုံးယောက်စလုံး တပြိုင်ထဲ အေးအေးအေး ဆိုပြီး နှုတ်ဆက်နေကြတယ်လေ… သူတို.သုံးယောက် နှုတ်ဆက်ကြပေမယ့် ကျွန်တော်နဲ. စကားပြောရတာ.. အားမရကြဘူးနဲ.တူပါတယ်….
ကျွန်တော်လဲ ဖြစ်နိုင်ရင် တနေကုန်သူတို.နဲ. စကားလက်စုံကြချင်ပါတယ်.. ဒါပေမယ့် တာဝန်တွေကရှိသေးတယ်လေ……….
အဲလိုနဲ. ဆိုင်ကယ်လေး စက်နှိုးပြီး ရုံးရှိရာကို ထွက်လာခဲ့တော့တာပေါ့… နောက်မှာတော့ သူတို.သုံးယောက် တိုးတိုးတိုးတိုး နဲ. စကားပြော ကျန်ခဲ့တော့တာပါပဲ…..
သူတို.နဲ.စကားပြောတုံး ကျွန်တော် သူတို.ကို မပြောပဲ ထားခဲ့တဲ့စကားလေးတစ်ခွန်းကို စိတ်ထဲမှာပဲ နာနာကျင်ကျင်နဲ. ရေရွတ်လိုက်မိတော့တယ်ဗျာ…….
ကိုနန်းတို.၊ကိုကျုံးတို၊ ကိုမန်းလေးတောင်တို.ရေ.. ခင်ဗျားတို.နဲ. စကားပြောခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်ဟာ ခင်ဗျားတို.အတွက် ဘာမှ လုပ်မပေးနိုင်တဲ့ ဘာကောင်မှ မဟုတ် တဲ့ အလကားကောင်တစ်ကောင်ပါဗျာ………………………လို. …………………
ကိုကိုတိုက်က နန်းတို့ ၊ ကျုံးတို့ ၊ တောင်တို့ နဲ့ လဲ စကားပြောတတ်သကိုးဗျ
ကိုယ့်မြို့ ကိုယ် စောင့်ရှောက်ကြပါဂုန်
အခုလို. ချီးကျူးလို.ကျေးဇူး… မန်းလေးကပြန်ရင် အိမ်ရှေ.မင်းထန်းတောက ထန်းရည်တစ်မြူ ဆွဲခဲ့ပေးမယ်… သိလား ဟဲဟဲ
ကျနော်က ပါဆယ်ထက် အဲဒီ ထန်းပင်အောက်က တဲလေးတွေထဲမှာ ကြွက်ကြော် ကြွပ်ကြွပ်လေးဝါးပြီး ဇိမ်နဲ့ထိုင်သောက်ချင်တာဗျ
ဒါဆို လာခဲ့လေ စောင့်နေမယ်… တပတ်အထိနေမှာမန်းလေးမှာ အကုန်တာဝန်ယူတယ်ဗျာ..ကဲ..
ဒီက ကဲမှာနော်… ခိခိခိ
မန္တလေးရဲ့ ကျုံးရေပြင်နဲ့ နန်းမြို့ရိုးမှာ အတိတ်ရဲ့အမှားတွေ… အတိတ်ရဲ့သင်ခန်းစာတွေရှိခဲ့တယ်လေ…
အဲဒီအမှားတွေအပေါ် သင်ခန်းစာယူပြီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည် မြေတွေ၊ သယံဇာတတွေ၊ စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေကို အပွန်းအပဲ့မခံရအောင် တတ်နိုင်သမျှစာတွေရေး၊ လက်လှမ်းမီရာ လူငယ်လူရွယ်တွေကို အသိပညာတွေပေးရင်း ချစ်သောမန်းမြေကို ခင်ဗျားကျေးဇူးဆပ်နိုင်ပါတယ်…
ကျွန်တော်က မန္တလေးသားမဟုတ်ဘူး… အဲဒီလိုပဲ မန္တလေးကို (၅)ခေါက်ထက်ပိုပြီးမရောက်ဖူးဘူး…
ဒါပေမယ့် ကျုံးရေပြင်နဲ့ နန်မြို့ရိုးမြင်တိုင်း ကျွန်တော်အင်အားရှိသလိုခံစားရတယ်…
အေးဗျာ ကိုဝတုတ် အခုလိုလေး အားပေးလို.ကျေးဇူးဗျာ… ခင်ဗျားပြောသလိုပါပဲ.. ကျွန်တော်တို.လဲ တတ်နိုင်သလောက်ကြိုးစားကြတာပေါ့ဗျာ…နော့
မြန်မာစံဌာနီ သာယာပါပေ့သည်…. ရေရိပ်ရေ အောက်ဆီ နေခြည်အောက် က အလွန်ပဏာရလှသည်…… အဆိုတော် မစိမ်းစိမ်း
ဘုရားကြီး ရှိတဲ့ မန်းတလေး အိုးအိုး လူယဉ်ကျေးမြို့ကြီးဟေ့ ။………အဆိုဆင်ပေါက်
မန်းမြေမှာ လေးနှစ်တာ ပညာ ဆည်းပူး ခဲ့ရာ……ကျုံးကြီးကိုလေ တစ်ခါ နောက်ဆုံး အနေနဲ့ ပြန်ကြည့် မိတယ်ကွာ……သိန်းတန် မြန်မာပြည်
ရွှေမန်းသူလေး….ဘီးကလေး နဲ့ စီးလို့နင်းကာသွား …ခင်မောင်ထူး
အဲဒီလို သီချင်းတွေ ကျုံး တွေ မန်းလေးတောင် နန်းမြို့ ရိုး မြနန်းစံကျော် ရွှေနန်းတော် က မန်းလေး ရဲ့ trade mark ဆို ရင် မမှားဘူးနော်။ သူတို့တွေ မရှိတော့တဲ့ တစ်နေ့ မြန်မာဆို တာ ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်တယ် လို့ထင်တယ်။ မန်းသူတော့ မဟုတ်ပေမယ့် မန်းမြေမှာ မြန်မာတွေ ထိန်းသိမ်းရမယ့် အမွေအနှစ်ဆိုတာ ရှိတော့ အဲဒီသီချင်းတွေ ပြန်ဆိုတဲ့ အခါ နောင်လာနောက်သားတွေ ကျုံးဆိုတာက၊ နန်းတော်ဆိုတာ ဘာလဲ အဖိုး ဘာလဲ အဖွားလို့ ပြန်မေးရမယ့် အဖြစ် မျိုးတော့ မရောက်စေချင်မိတာ အမှန်ပဲ။
နောင်လာနောက်သားတွေ အဲလိုမမေးအောင် ကျွန်တော်တို.ရဲ.သားတွေသမီးတွေ ကိုလဲ ပြောပြထားရမှာပေါ့…
ခေတ်ရေစီးကြောင်းနဲ.အညီ ယဉ်ကျေးမှုကို ထိန်းသိမ်းပါလို.
အဆိုတော်နာမည်ကလဲ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်နော် မစိမ်းစိမ်းတဲ့…
စိတ်ချပါ မိတိုက်ရဲ့ အဲဒါတွေကတော့ ငါတို့မြန်မာပြည်ရဲ့ အမွေအနှစ်အများပိုင်လေကွာ။
၀တုတ် ဟာသမလုပ်နဲ့ အဲဒီသီချင်းနားထောင်မလားအခုပို့လိုက်မယ်
အဲဒီအဆိုတော်ရဲ့သားက ငါ့ဘော်ဘော် ဘာမှတ်နေလဲ
မင်းနေပြည်ရဲ့ လက်ကျန်အမွေကို ထိန်းသိမ်းရာမှာ
စစ်မှန်လှပတဲ့ သမိုင်းအမွေဆိုတာကလည်း ..လွယ်လွယ်နဲ့တော့ကျန်ရစ်မယ် မထင်ပါဘူး..
ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်.မစွမ်းနိုင်ဘဲ စကားနဲ့ပဲ ပြောနိုင်တဲ့လူတွေ..များလာရင်.အားကောင်းလာရင်လည်း..
စွမ်းနိုင်တဲ့လူ အနည်းငယ်လုပ်နိုင်တာထက် ပိုထိရောက်ကောင်း ထိရောက်မှာပေါ့ဗျာ..
အဓိက ကတော့မရပ်မနားပြောနေ ဖို့သာ လိုရင်းမဟုတ်လားဗျ..
ဆိုတော့ အားလုံးတက်ညီလက်ညီ ထောက်ပြ ၀ိုင်းဝန်းကြတာပေါ့..
အိုကေ ကိုမတ်ရေ ကြိုးစားကြတာပေါ့ဗျာ… အခုလို အတွေးရှိတဲ့အတွက် ကျွန်တော် ၀မ်းသာတယ်ဗျာ.. တကယ်…
ဖြောင်း ဖြောင်း ဖြောင်း ဖြောင်း ဖြောင်း ဒါကကျနော် ကိုရွှေတိုက် အတွေးလေးကိုကြိုက်လွန်းလို့
မန်းမြို့ကို ရက်ကြာအောင်တစ်ခါမှမနေဖူးတော့ အလှအပေတွေကိုသိပ်မသိဘူးဗျာ
ရွှေမန်းသားမဟုတ်ပမဲ့လည်း မြန်မာပြည်သားတစ်ယောက်အနေနဲ့တော့ ခံစားရပါတယ်
ဒါနဲ့စကားမစပ် လေးပေါက်နဲ့ကိုရွှေတိုက်တို့ မန်းလေးသူမန်းလေးသားတွေ တယုတ်ကို ကျားကန်ပေးထားနော် တော်ကြာ ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ရွှေဘိုဘက်လာနေမှဖြင့် ၀ါးရင်းတုတ်ကလည်း မစွမ်းတော့ဘူးဗျ ဦးအောင်ဇေယျလို ခေါင်းဆောင်ကောင်းက မရှိတော့ဘူး။
ဦးအောင်ဇေယျလို ခေါင်းဆောင်ကောင်းမရှိပေမယ့် ကိုယ်ကိုကိုယ်ခေါင်းဆောင်နိုင်ရင်ကို တစ်ယောက်ပေါင်းအများဖြင့် ကောင်းကျိုးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဗျာ…..
နန်းစကား ကျုံးစကား တောင်စကားတွေနဲ့ မိုက်တယ်ဗျာ။
အတွေးလေးလှတာ ဦးဘလက်ကြောင့်လဲပါတာပါပဲ… ဦးဘလက် မန်းလေးမြို.သိမ်းကဗျာဖတ်ပြကတည်းက ရေးချင်နေတာ… ဒီနေ.မှ မန်းလေးကို သွားကျုံးဘေးရောက်တော့ သတိရပြီးရေးလိုက်တာပါ….
ရင့်နင့်စွာ ဖွဲ့ ဆိုထားသော ကိုရွှေတိုက်စိုး ၏ဖွဲ့ သီမှုကို ခံစားသွားပါတယ်
ဘိုရွှေရေ… ဖတ်လို့ ကောင်းတဲ့ အတွေးအခေါ်စာစုပါဘဲ ။ နောက်ထပ် ပို့ စ်တွေကို ကိုရွှေ အတွေးမထူ့ တစ်ထူ လေး လို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ဗျာ ။
အခုလို ခေါင်းစဉ်လေးစဉ်းစားပေးတာ ကျေးဇူးဗျို.ကိုပေရေ…
ဒီနေ့ပဲ ကာတွန်းလေးတကွက် ဖတ်ခဲ့ရသေးတယ် ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ
မြန်မာသမ္မဒကြီးနဲ့ တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်တို့ ယှဉ်ရပ်ပြီး ကျနော်တို့ နိုင်ငံသီချင်းကို ဆိုကြတာ
သမ္မဒ ကြီးက ကမ္ဘာမကြေ … ဗမာပြေ.. တို့ဘိုးဘွား အမွေအနှစ်မို့…..×× တို့ကာကွယ်မလေ… လို့အသံတိုးတိုးလေးနဲ့ ဆိုနေတုန်း..။ မစ္စတာဟူက ဒါတို့ပြေ..ဒါဒို့မြေ ဒို့ ပိုင်နက်မြေ.. ဆိုပြီး အသံကျယ်ကြီးနဲ့ ဟစ်နေတဲ့ပုံပေါ့ဗျာ..။
ရွှေတိုက်စိုးရဲ့ ပို့စ်ကိုဖတ်အပြီး.. ငါလည်းလေ.. အလကားကောင်တစ်ကောင်ပါပဲလား.. ဟုသာ….
ကိုရွာစားကျော်ရေ အလကားကောင်တွေပေါင်းပြီး အားတစ်ခုဖြစ်အောင် ကြိုးစားကြတာပေါ့ဗျာ..နော………….
မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲ တိုက်ပီပေါ့ ..
လက်မထောင် အားပေးသွားပါတယ်ဗျာ …
အလကား ကောင်တွေဘာတွေ လုပ်မနေပါနဲ့ ..
ကမ္ဘာ့ လူဦးရေ အများဆုံး တိုင်းပြည် ၂ခုကြားက
တိုင်းပြည်အနေနဲ့ လုပ်နိုင်တာ တခုရှိပါရဲ့ …
သမိုင်း အမွေအနှစ် ဆိုတာ လူမျိုးက စောင့်ရှောက်ရမှာဖြစ်သလို
လူမျိုးဆိုတာ လူ က လုပ်တဲ့ အမျိုး မို့ …
အချိန်ရှိခိုက် လုံ့လ စိုက်စေလိုဂျောင်း..
ကမ္ဘာချီအောင် တိုက်ရမယ့် တိုက်ပွဲမို့ …
တပ်သားသစ်လေးတွေ မြန်မြန် စုဆောင်းရရှိဖို့လိုဂျောင်း..
လူဗျိုဂျီးများ …အခါမလင့် စေဂျင်ဂျောင်း..
နည်းနည်းလေးတော့ လွဲနေတယ် …. ဘယ်လို ကြည့်ကြည့် တရုတ်နဲ့ လုံးဝ မတူတာ အသေချာပဲဟာကို … ဒါနဲ့ … မန်းလေးမှာ ယောကျာ်းတွေများတဲ့သဘောလား နန်းမြို့ရိုး ၊ ကျုံးနဲ့ တောင်က အထီးတွေချည်းမို့လို့ … ဟိဟိ
ရွှေတိုက်ရေ …. အလွန်ကောင်းတဲ့ သရော်စာလေးပါပဲ …….။ အတည်ပေါက်နဲ့ ရေးထားတယ် ။
သက်မဲ့တွေကို သက်ရှိတစ်ယောက်လို ခံစားဖွဲ့နွဲ့ရေးထားတာလေးကတော့ ပီပြင်ပါပေတယ်ဗျာ……. နန်းမြို.ရိုးက ကျွန်တော်ကို စိမ်းစိမ်းကြီးစိုက်ကြည့်နေတယ်ဗျ…. အဲဒီနေရာလေးက အရမ်းပေါ်လွင်တယ်ရယ်ဗျာ…….. ကြိုက်တယ်ကိုတိုက်ရေ အခုရက်ပိုင်းမှာ သူငယ်ချင်းတွေရေးတဲ့ စာတွေ ကဗျာတွေအားလုံးကို အားပေးချင်ပေမယ့် ရုံးပြောင်းရွှေ့ရမှာမို့ အလုပ်ခပ်များများဆိုတော့ လှည့်မကြည့်နိုင်ဖြစ်နေတာ နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါလို့……… ကိုတိုက်အတွက် သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ဆိုသွားဦးမဗျ…….. ရွှေမန်းသူလေး…..ဘီးလေးစီးစီးလို့နင်းကာသွား…..မြင်မြင်သူ အသည်းမှာစွဲလို့မူး….. နှလုံးသားလေး ထိန်းချုပ်မရတော့ဘူး……….
မန်းလေးသွားရမယ်ဆိုလို့ ပျော်နေတယ် ရေးထားတော့…
အုပ်အုပ်နဲ့ဝေးနေတုန်း ကဲလို့ရတာကို ရေးမယ်ထင်နေတာ။
ခုတော့လည်း ရွှေတိုက်စိုး ဆိုတာ အတည်ကြီး ပါလား။